निजगढ विमानस्थलको नकारात्मक प्रभाव बाराको टाँगिया बस्ती ४५ वर्षदेखि अँध्यारोमा उहाँलाई १० वर्षको हुँदादेखि छिट्टै बिजुली बाल्न पाइन्छ भन्ने सुनेको याद छ । १७ वर्ष बित्यो, ५ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने निजगढ बजारको झिलिमिली हेरेर चित्त बुझाउनु परेको छ । ११ घण्टा
प्राथमिकतामै पर्दैन विपद् व्यवस्थापन आईतबार, असार ६, २०७८ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अरु स्थानीय तहभन्दा चाँगुनारायण नगरपालिका अगाडि रहेको बताए पनि ऐनको दफा २४ मा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छैन ।
कर्णालीका स्याउ किसान बीमातर्फ आकर्षित शनिबार, वैशाख १८, २०७८ खेतीकिसानीमा लागेकाले बीमा गर्ने परिपाटीको विकास नेपालमा राम्रोसँग भइसकेको छैन । तर बीमा गरेपछि खेतीकिसानीमा परेको घाटा र सङ्कट निवारण हुन्छ भन्ने उदाहरण कणर्ालीका तीन जिल्लाका एक हजार ३ सय ८२ किसानले पाएको उपलब्धिले देखाएको छ ।
कौसी खेती प्रविधि सिकाउने ‘कृषि काका’ १२ घण्टा काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का रामजीप्रसाद ढकाल आफ्नै घरको कौसीलाई नै करेसाबारी बनाएर भान्साका लागि दैनिक चाहिने तरकारी उत्पादन गर्दै र अरुलाई सिकाउँदै आउनु भएको छ ।
'चोरी शिकारी' गैँडा संरक्षणको मुख्य चुनौती शनिबार, वैशाख ११, २०७८ विभागले वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको एकिन विवरण सङ्कलन गर्ने र प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पहल गरेका कारण पनि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम हुँदै गएको आचार्यको भनाइ छ ।
दूधमा आत्मनिर्भरको घोषणा कति वास्तविक? शनिबार, चैत २१, २०७७ तर सरकारले भने एक हप्ताअघि मुलुकलाई धुलो दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । अघिल्लो वर्षको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन दूध मौज्दात भएका आधारमा सरकारले आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि वास्तविक आत्मनिर्भरका लागि भने चुनौती देखिन्छ ।
अण्डा,मासु र माछामा आत्मनिर्भर,चुनौतीका चाङ आईतबार, चैत १५, २०७७ नेपालमा कुल ३८ लाख किसानमध्ये ३६ लाखले पशुपन्छी पाल्छन् भने डेढ लाख किसानले व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेका छन् । यसबाट कृषिजन्य उत्पादन करिब १० प्रतिशतले बढीरहेको छ ।
बाैद्धिक अपाङ्गता भएकालाई सीप र शिक्षा शुक्रबार, फागुन २८, २०७७ बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिमपछि समाजमा पुनस्र्थापना गराउनका लागि सीपमुलक तालिमको आवश्यकता परेको अनुभव विद्यालयको छ । अहिले विद्यालयले १५ जनालाई मात्रै आवासीय सुविधा दिइरहेको छ ।
नेपालमा अलैंचीको ५ वटा जात दर्ता हुँदै बुधबार, फागुन २६, २०७७ काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक अलैंचीको ५ वटा जात दर्ता हुने भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन् ।
कुरीति अन्त्यका लागि धर्मगुरुहरूको ऐक्यवद्धता सोमबार, फागुन १०, २०७७ ललितपुरमा आइतबार भएको कार्यक्रममा सहभागी धार्मिक अगुवाहरू बलविवाह लगायतका कुरीतिजन्य परम्परागत हानीकारक अभ्यास अन्त्यका लागि आफूहरू एकजुट भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बाढी पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घर सरकारले बनाइदिने सोमबार, फागुन १०, २०७७ सरकारले बाढी पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घर बनाइदिने भएको छ । भुकम्प प्रभावितलाई जस्तै बाढी पहिरो प्रभावितका घर पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तपाईँको पिसाबको हिसाब गर्नुभएको छ ? शनिबार, माघ १७, २०७७ तपाईँ दिनमा कति लिटर पिसाब गर्नु हुन्छ ? हिसाब निकाल्नु भएको छ ? हरेक दिन हिसाब निकालेर पिसाब सङ्कलन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको आम्दानी बढछ, राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ पनि बचत हुन्छ ।
नेकपाका दुई पक्षसँग निर्वाचन आयोगको छलफल, कुन पक्षले के भने ? शुक्रबार, माघ १६, २०७७ निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनका विषयमा नेकपाका दुवैपक्षसँग छलफल गरेको छ । दुवैपक्षका अध्यक्ष वाहेकका नेताहरु आयोगमा पुगेर आफ्नो धारणा राखेका छन्।
कृषि अनुदान कार्यान्वयनमा जनशक्ति बाधक शनिबार, माघ १०, २०७७ उपसचिव सुवेदीले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि व्यक्तिसँग त्यति धेरै पैसा पनि छैन । वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रमा सहजै अगाडि बढेर ऋण लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन ।
सिनेमा घर खुल्यो, तर दर्शक तान्नै मुस्किल बुधबार, पुस २९, २०७७ काठमाडौं । नेपाल चलचित्र सङ्घका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर एक सय ९३ वटा चलचित्र देखाउने पर्दा छन् । ती मध्ये सङ्घले सबै चलाउन निर्देशन दिए पनि कतिपय सञ्चालक सरकारको अनुमति कुरिरहेका छन् ।